Imigaqo nemiqathango yeeMillion Menzi | Imigaqo yokusetyenziswa- Abenzi bezigidi
Imigaqo nemiqathango yeeMillion Menzi | Imimmiselo yokusebenzisa
Nceda ufumane apha ngezantsi kwimigaqo nemiqathango yaBenzi ezigidi (“iMigaqo yokuSebenzisa”).
Nceda ufunde le Migaqo ngononophelo. Ukufikelela, kunye nokusetyenziswa kwezigidi zeMveliso yabenzi ("iiMveliso"), iinkonzo zeMiliyoni zaBenzi ("Iinkonzo"), kunye neWebhusayithi yaBazizigidi https://MillionMakers.com/ ("IWebhusayithi") okanye nasiphi isizinda, kubandakanya nawuphi na umxholo wayo, unemiqathango kwisivumelwano sakho nale Mimiselo. Kuya kufuneka ufunde, uvumelane, kwaye wamkele yonke imigaqo kunye neemeko ezikule Migaqo. Ngokwenza iakhawunti, okanye ngokusebenzisa okanye ngokundwendwela iWebhusayithi yethu okanye iimveliso okanye iinkonzo, ubophelelekile kule Mimiselo kwaye ubonakalisa ukwamkeleka kwakho okuqhubekayo kwale Migaqo.
Iakhawunti yakho yezigidi
Ukuba wenza iakhawunti kwiWebhusayithi, unoxanduva lokugcina ukhuseleko lweakhawunti yakho, kwaye uxanduva lwakho ngokupheleleyo kuyo yonke imisebenzi eyenzeka phantsi kweakhawunti kunye naziphi na ezinye izinto ezenziweyo ngokunxulumene neakhawunti. Uyavuma ukubonelela nokugcina ulwazi oluchanekileyo, lwangoku kunye nolugqibeleleyo, kubandakanya ulwazi lwakho loqhakamshelwano lwezaziso kunye nonxibelelwano oluvela kuthi kunye nolwazi lwakho lokuhlawula. Awunakho ukusebenzisa ulwazi olungeyonyani okanye olulahlekisayo ngokunxulumene neakhawunti yakho, okanye urhwebe ngegama okanye igama labanye, kwaye Abenzi bezigidi basenokutshintsha okanye basuse naluphi na ulwazi abalubona lungalunganga okanye lungekho mthethweni, okanye kungenjalo baveze abenzi bezigidi abazibanga amaqela esithathu. Uyavuma ukuba singathatha amanyathelo okuqinisekisa ukuchaneka kolwazi osinike lona.
Unoxanduva lokuthatha amanyathelo afanelekileyo ukugcina imfihlo yegama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha. Kuya kufuneka kwangoko wazise abaSebenzi abazizigidi ngayo nayiphi na into engagunyaziswanga yokusebenzisa ulwazi lwakho, iakhawunti yakho okanye naluphi na olunye ulwaphulo. Izigidi zabenzi azizukubekwa tyala ngazo naziphi na izinto ezenziweyo okanye ukushiywa nguwe, kubandakanya nawuphi na umonakalo walo naluphi na uhlobo olwenziwe ngenxa yezenzo ezinjalo okanye ukushiywa.
Uxanduva lwabasebenzisi beMillionMakers, iiMveliso, kunye / okanye iiNkonzo
Ukufikelela kwakho ku- "MillionMakers.com", kunye nakho konke ukusebenzisa kwakho iWebhusayithi, iiMveliso, kunye / okanye iiNkonzo kufuneka kube semthethweni kwaye kufuneka kuthotyelwe yonke iMiqathango, kunye nasiphi na esinye isivumelwano phakathi kwakho neeMillion Makers kunye / okanye neMM Solutions. I-INC kunye / okanye i-Million Makers LLC kunye / okanye i-MM LLC kunye / okanye i-Million Makers Solutions INC kunye / okanye iMM LTD. kunye / okanye ezigidi zabenzi LTD.
Xa ungena okanye usebenzisa iWebhusayithi "MillionMakers.com", iiMveliso, kunye / okanye iiNkonzo, kuya kufuneka uziphathe ngendlela enembeko kunye nembeko ngawo onke amaxesha. Siyakwalela ngokuthe ngqo nakuphi na ukusetyenziswa kweWebhusayithi, iiMveliso, kunye / okanye iiNkonzo, kwaye uyavuma ukuba ungayisebenzisi iWebhusayithi, kuyo nayiphi na kwezi zinto zilandelayo:
Ukuziphatha ngendlela enokuthi ibe lityala lolwaphulo-mthetho, okukhokelela kwityala loluntu okanye ngolunye uhlobo olwaphula nasiphi na isixeko, urhulumente, umthetho wesizwe okanye owamazwe aphesheya okanye umgaqo osilelayo ukuthobela umthetho olandelwayo we-intanethi.
Ukunxibelelana, ukuhambisa, okanye ukuthumela izinto ezinamalungelo obunini obunini obunamalungelo obunini okanye obunini bolunye umntu ngaphandle kokuba ungumnini welungelo lokushicilela okanye unemvume yomnini wokuzithumela.
Ukunxibelelana, ukuhambisa, okanye ukuthumela izinto eziveza iimfihlo zorhwebo, ngaphandle kokuba ungumnikazi wazo okanye unemvume yomnini.
Ukunxibelelana, ukuhambisa, okanye ukuthumela izinto eziphula umthetho kuyo nayiphi na into enesidima, ubumfihlo okanye ilungelo loluntu lokwazisa.
Ukuzama ukuphazamisa nangayiphi na indlela kwiWebhusayithi, okanye iinethiwekhi zethu okanye ukhuseleko lwenethiwekhi, okanye ukuzama ukusebenzisa iWebhusayithi yethu ukufikelela ngokungekho mthethweni kuyo nayiphi na enye inkqubo yekhompyuter.
Ukufikelela kwidatha eyenzelwe wena, okanye ukungena kwiserver okanye kwiakhawunti, ongagunyaziswanga ukuba ungene kuyo.
Ukuzama ukukhangela, ukuskena okanye ukuvavanya ukuba sesichengeni kwenkqubo okanye uthungelwano okanye ukwaphula ukhuseleko okanye amanyathelo okuqinisekisa ngaphandle kogunyaziso olufanelekileyo (okanye uphumelele kwilinge elinjalo)
Ukuzama ukuphazamisa okanye ukuphazamisa ukusebenza kweWebhusayithi, iiMveliso, kunye / okanye iiNkonzo, okanye ukubonelelwa kweenkonzo zethu kubo nabaphi na abanye abasebenzisi beWebhusayithi, umboneleli wethu wokubamba okanye inethiwekhi yethu, kubandakanya, ngaphandle komda, ngeendlela zokungenisa intsholongwane kwiWebhusayithi, ukulayisha ngaphezulu, "ukukhukula", "ukuqhushumisa iposi" okanye "ukubetha" iWebhusayithi.
Ukongeza, ukuba usebenzisa iakhawunti, wenza igalelo kwiakhawunti, uthumela izinto kwiWebhusayithi, uthumela amakhonkco kwiWebhusayithi, okanye kungenjalo wenze izinto zifumaneke ngeWebhusayithi (nayiphi na into enjalo, "Umxholo"), uxanduva lwakho kuphela Umxholo we, kunye nawuphi na umonakalo kunye nomonakalo obangelwa kuloo Mxholo. Injalo imeko nokuba umxholo ekuthethwa ngawo wenza isicatshulwa, imizobo, ifayile yeaudio, okanye isoftware yekhompyuter. Ngokwenza uMxholo ufumaneke, umele kwaye uqinisekise ukuba:
ukukhuphela, ukukopa kunye nokusetyenziswa kwesiqulatho akusayi kunyhasha amalungelo obunini, kubandakanya kodwa kungaphelelwanga kwilungelo lokushicilela, ilungelo lobunikazi, uphawu lwentengiso okanye amalungelo ayimfihlo okurhweba, walo naliphi na iqela lesithathu.
ukuba umqeshi wakho unamalungelo obunini bokuyilwa oyenzileyo, (i) ungayifumana imvume ebhaliweyo evela kumqeshi wakho yokuthumela okanye yokwenza ukuba uMxholo ufumaneke, kubandakanya kodwa kungaphelelwanga nakweyiphi na isoftware, okanye (ii) ukhusele umqeshi wakho uxwebhu olubhaliweyo malunga nawo onke amalungelo kwi okanye kuMxholo.
Uthobele ngokupheleleyo naliphi na iphepha-mvume lesithathu elinxulumene noMxholo, kwaye wenze zonke izinto eziyimfuneko ukuphumelela ngempumelelo ukugqiba abasebenzisi nayiphi na imigaqo efunekayo.
umxholo awuqulathanga okanye ufakele nayiphi na intsholongwane, iintshulube, i-malware, amahashe eTrojan okanye enye into eyingozi okanye eyonakalisayo.
Umxholo awungogaxeki, kwaye awuqulathanga mgaqo wokuziphatha ongafunekiyo okanye ongafunekiyo oyilelwe ukuqhuba ukugcwala kwiindawo zomntu wesithathu okanye ukonyusa umgangatho weinjini yokukhangela kwiziza zomntu wesithathu, okanye ukuqhubekeka nokwenza izinto ezingekho mthethweni okanye ezingekho mthethweni (ezinje ngobuqhetseba) okanye ukulahlekisa abamkeli njenge kumthombo wezinto (ezinje ngokukhangela izinto).
Umxholo awuyinto engamanyala, enenkululeko, inenzondo okanye ubuhlanga okanye inkcaso eyamkelekileyo, kwaye ayiphuli amalungelo abucala okanye oluntu nawuphina umntu wesithathu.
Ukuba ucima umxholo, abaSenzi abazizigidi baya kusebenzisa iinzame ezifanelekileyo zokuwususa kwiWebhusayithi nakwiseva zethu, kodwa uyavuma ukuba i-caching okanye izingqinisiso zomxholo azinakwenziwa zifumaneke eluntwini kwangoko.
Unoxanduva lokuthatha amanyathelo okhuseleko njengoko kufuneka ukuzikhusela kunye neenkqubo zekhompyuter yakho kwiintsholongwane, iintshulube, amahashe eTrojan, kunye nezinye izinto eziyingozi okanye ezonakalisayo. Isigidi sabenzi siyakuthatha amanyathelo okhuseleko ukuthintela ukuhanjiswa komxholo oyingozi ukusuka kwiinkqubo zawo zetekhnoloji ukuya kwiinkqubo zakho zetekhnoloji.
Abenzi bezigidi bazikhupha kulo naliphi na ityala lomonakalo okanye umonakalo oye wabangelwa kukufikelela okanye ukusebenzisa iWebhusayithi, iiMveliso, kunye / okanye iiNkonzo, okanye ukufikelela okanye ukusebenzisa iiwebhusayithi ezingabizigidi.
Isigidi sabenzi sinelungelo (nangona ingesosibophelelo) (i) sokwala okanye sisuse nasiphi na isiQinisekiso, kwiqela labenzi bezigidi ezizizimvo, esaphula nayiphi na imigaqo-nkqubo yabenzi bezigidi okanye iyingozi nangayiphi na indlela, okanye (ii) iphelisa okanye iyala ukufikelela nokusetyenziswa kweWebhusayithi, iiMveliso, kunye / okanye iiNkonzo, kuye nawuphina umntu nangasiphi na isizathu, ngokubona kwabaSebenzi abazizigidi.
Ukusetyenziswa komxholo weQela lesithathu, iSoftware, ukuSebenzisa, iiNkonzo kunye nezixhobo
Isigidi sabenzi asikhange siqwalasele, kwaye asinakuphinda sihlole, zonke izinto, kubandakanya isoftware yekhompyuter, eposwe kwiWebhusayithi, kwaye ke ayinakuba noxanduva lomxholo, ukusetyenziswa okanye iziphumo. Ngokusebenza kweWebhusayithi, abaSenzi abazizigidi abamele okanye bathethe ukuba bayaxhasa izinto ezithunyelweyo, okanye bakholelwa ukuba loo nto ichanekile, iluncedo okanye ayinabungozi. Indawo yeWebhusayithi inokuba nomxholo okhubekisayo, ongenasidima, okanye ochasayo, kunye nomxholo oqulethe ukungachaneki kwezobuchwephesha, iimpazamo zokuchwetheza kunye nezinye iimpazamo. IWebhusayithi inokuba nayo inezinto ezinyhasha amalungelo abucala okanye amalungelo oluntu, okanye inyhasha ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kunye namanye amalungelo obunini, omntu wesithathu, okanye ukukhuphela, ukukopa okanye ukusetyenziswa kwayo kuxhomekeke kwimigaqo eyongezelelweyo, echaziweyo okanye engafakwanga. Abenzi bezigidi bazikhupha kulo naliphi na uxanduva lwayo nayiphi na ingozi kunye / okanye umonakalo obangelwe kukusetyenziswa okanye ukukhutshelwa kokuthunyelwa kwamanye amaqela kwiwebhusayithi.
Umxholo othunyelwe kwezinye iiWebhusayithi
Khange siyihlolisise, kwaye asinakuphonononga, yonke into, kubandakanya isoftware yekhompyuter, enziwe yafumaneka kwiiwebhusayithi kunye namaphepha ewebhu aqhagamshela kuwo iMillionMakers.com, kunye nokunxibelelana neMillionMakers.com. Izigidigidi zabenzi azinalo nolawulo kwezi webhusayithi ze-non-Million kunye neephepha zewebhu kwaye ayinaxanduva lokuqulathiweyo okanye ukusetyenziswa kwazo. Ngokuqhagamshela kwiwebhusayithi yabenzi abangasizigidi okanye iphepha lewebhu, abenzi beMillion abamele okanye bathethe ukuba ixhasa iwebhusayithi okanye iphepha lewebhu.
Njengoko i-Million Makers ifuna ukuba abanye bahloniphe amalungelo ayo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, iyawahlonipha amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda wabanye. Ukuba uyakholelwa ukuba izinto ezikhoyo okanye ezinxibelelaniswe neWebhusayithi ziyaphula ilungelo lakho lokushicilela, uyakhuthazwa ukuba wazise abenzi beMillion ku-info@millionmakers.com. Isigidi sabenzi siya kuthi, njengoko sinakho, siphendule kuzo zonke izaziso, kubandakanya njengoko kufuneka okanye kufanelekile ngokususa izinto ezaphulayo okanye ukukhubaza lonke ikhonkco kwizixhobo zokwaphula umthetho. Ukuze uzise izinto ezaphula umthetho kuthi, nceda usithumelele i-imeyile, kuya kufuneka ubonelele uMmeli wethu we-DMCA ngolu lwazi lulandelayo:
(a) utyikityo lombane okanye lomzimba lomntu ogunyazisiweyo ukuba enze egameni lomnini womsebenzi onamalungelo obunini;
(b) Ukuchongwa kwemisebenzi ene-copyright kunye nendawo ekuyo kwiWebhusayithi yomsebenzi otyholwa ngokophula umthetho;
(c) ingxelo ebhaliweyo yokuba unokholo oluqinisekileyo lokuba usetyenziso oluphikisanayo alugunyaziswanga ngumnini, ngumenzeli wakhe okanye ngumthetho;
(d) igama lakho kunye neenkcukacha zonxibelelwano, kubandakanya inombolo yomnxeba kunye nedilesi ye-imeyile; kwaye
(e) ingxelo yakho yokuba olu lwazi lungentla kwisaziso sakho luchanekile kwaye, phantsi kwesigwebo sobuxoki, ukuba ungumnini welungelo lokushicilela okanye ugunyazisiwe ukuba wenze egameni lomnini welungelo lokushicilela.
Iinkcukacha zonxibelelwano zoMmeli we-DMCA wesaziso samabango okophulwa kwelungelo lokushicilela lase-US yile: MM Solutions Inc., i-imeyile: info@millionmakers.com.
Kwimeko yomsebenzisi onokuthi anyhashe okanye aphule kaninzi amalungelo obunini okanye amanye amalungelo obunini obunini babenzi bezigidi okanye abanye, Abenzi bezigidi banokuthi, ngokubona kwabo, baphelise okanye bangavumi ukufikelela kunye nokusetyenziswa kweWebhusayithi, iiMveliso, kunye / okanye Iinkonzo. Kwimeko yokupheliswa okunje, Abenzi bezigidi abasayi kuba nasibophelelo sokubonelela ukubuyiselwa kwaso nasiphi na isixa-mali esasifudula sihlawulwa kwi-Million Makers kuye nawuphina umntu ngokubhekisele kupheliso olunjalo.
Izigidi zabenzi, uphawu lwezigidi zeMenzi, kunye nazo zonke ezinye iimpawu zorhwebo, amanqaku enkonzo, imizobo kunye neelogo ezisetyenziswa ngokunxulumene neWebhusayithi, iiMveliso, kunye neeNkonzo, ziimpawu zorhwebo okanye ziimpawu zorhwebo ezibhalisiweyo zeMillion Makers okanye zezigidi zeLayisensi yabenzi. Olunye uphawu lwentengiso, amanqaku enkonzo, imizobo kunye neelogo ezisetyenziswa ngokunxibelelene neWebhusayithi, iiMveliso, kunye neeNkonzo, zinokuba ziimpawu zorhwebo zabanye abantu besithathu apho iphepha-mvume elo liluncedo olukhethekileyo kunye nokusetyenziswa kwethu ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela, okanye impahla yabanini bazo. Ukusetyenziswa kwakho kweWebhusayithi akukuniki lungelo okanye ilayisensi yokuvelisa kwakhona okanye ukusebenzisa abanye abantu abazizigidi okanye uphawu lwentengiso lomntu wesithathu. Ngokunjalo, awunikeli lungelo okanye iphepha-mvume lokuphinda uvelise okanye usebenzise naluphi na uphawu lwentengiso, amanqaku enkonzo, imizobo kunye / okanye iilogo, ngaphandle kokuba ugunyaziswe nguwe.
Utshintsho kumxholo, iimveliso kunye neenkonzo
Ukuqwalaselwa kunye nokubalulwa kweWebhusayithi, kubandakanya ngaphandle komda wonke umxholo okhoyo, iiMveliso, kunye neeNkonzo zinokulungiswa kunye / okanye zihlaziywe amaxesha ngamaxesha, ngokokubona kweMillion Menzi. Uboshwe lulo naluphi na utshintsho okanye uhlaziyo, ngaphandle kokuba olo tshintsho lucebisa ukusebenza kunye nexabiso leWebhusayithi, iiMveliso kunye / okanye neeNkonzo.
Umda woqinisekiso lwezigidi zabenzi, abaBoneleli bayo kunye naBanini bamaphepha-mvume
Izigidigidi zabenzi zigunyazisa abathengi abazizigidi ngeemveliso ezihlawulelweyo kunye / okanye iinkonzo, ngaphandle kokuba abaxhasi bahlawule zonke iimali ekufuneka behlawulwe, kwaye ngaphandle kokungahlawuli naziphi na izibophelelo ezibhekisa kwizigidi zabenzi, ukubakho kweMveliso kunye / okanye iiNkonzo ("ixesha elongezelelweyo") amashumi alithoba anesibhozo eepesenti (98%) ngenyanga. Ukuba ngesizathu esabekwa kuphela zizigidi zabenzi ixesha lokugqibela alifezekiswanga, abaSebenzi abazizigidi abanoxanduva lokuhlawula naluphi na uhlobo "lomonakalo ombiweyo", iimveliso kunye / okanye iiNkonzo azifumaneki ngokuchasene nexesha elongezelelweyo. Uyavuma ukuba kuya kuba nzima ukumisela isixa somonakalo oza kuxhamla kuwe ukuba ixesha lokugqibela alizukufezekiswa. Uyavuma kwakhona ukuba ishedyuli yembuyekezo engasentla ayizukukhokelela kulo naluphi na uhlobo lomonakalo ophelisiweyo okhokelela kulo naluphi na uhlobo lwelahleko enokwenzeka kunye nesixa selahleko yakho yokwenyani. Nangona kunjalo, ukuba iiMveliso kunye / okanye iiNkonzo azifumaneki kuwe ngenxa yesizathu esichaphazeleka kwi-Million Makers kwithuba eliqhubekayo leentsuku ezintlanu (5) okanye nangaphezulu, ungasiphelisa isivumelwano sakho ngokubhalela kwangoko, kwaye ungacela Imbuyekezo yemirhumo ehlawulwe nguwe enxulumene neeMveliso ezingafumanekiyo kunye / okanye neeNkonzo, pro-rata ixesha eliseleyo elingasetyenziswanga lesivumelwano sakho.
Abenzi bezigidi kunye nabanini bamaphepha-mvume abenzi ziqinisekiso okanye zimelo ngokubhekisele kwiWebhusayithi, iiMveliso kunye neeNkonzo, okanye nayiphi na indawo enxibeleleneyo okanye umxholo wayo, kubandakanya umxholo, ulwazi kunye nezinto ezikulo okanye ukuchaneka, ukugqibelela, okanye ixesha elifanelekileyo lomxholo. , ulwazi kunye nezixhobo. Kananjalo asiqinisekisi okanye sibonisa ukuba ukufikelela kwakho okanye ukusetyenziswa kweWebhusayithi, iiMveliso, kunye / okanye iiNkonzo, okanye nayiphi na indawo enxibeleleneyo ayinakuphazanyiswa okanye ingenazimpazamo okanye okushiyekileyo, ukuba iziphene ziya kulungiswa, okanye iWebhusayithi, Iimveliso , kunye / okanye neeNkonzo, okanye nasiphi na isiza esixhumeneyo asinazintsholongwane zekhompyuter okanye ezinye izinto eziyingozi. Asithathi xanduva, kwaye asizukubekwa tyala ngomonakalo kuye, okanye intsholongwane enokuthi ichaphazele isixhobo sakho sekhompyuter okanye enye ipropathi ngenxa yokusebenzisa kwakho iiMveliso okanye iiNkonzo, okanye ukufikelela kwakho, ukusebenzisa, okanye ukukhangela Iwebhsayithi, okanye ukhuphelo lwakho okanye ukhuphelo lwalo naluphi na uMxholo kwiWebhusayithi. Ukuba awonelisekanga yiWebhusayithi, olona nyango lwakho kukuyeka ukusebenzisa iWebhusayithi.
Akukho ngcebiso, iziphumo okanye ulwazi, nokuba kungomlomo okanye kubhaliwe, olufunyenwe nguwe kwi-Million Makers, okanye ngeWebhusayithi, eya kwenza nasiphi na isiqinisekiso esingakhange senziwe ngokucacileyo apha. Isigidi sabenzi asinyanzelekanga ukuba sisekele, sixhase, sanction, sikhuthaze okanye sivumelane nawo nawuphi na umxholo okanye nawuphi na umxholo womsebenzisi, okanye naluphi na uluvo, isindululo, umxholo, ikhonkco, idatha okanye iingcebiso ezichaziweyo okanye ezichaziweyo kulo, kwaye izigidi zabenzi ziyazichaza ngokucacileyo naziphi na uxanduva unxibelelwano nomxholo womsebenzisi kunye nayo nayiphi na enye into, izinto okanye ulwazi olufumanekayo kwiWebhusayithi okanye kwiiMveliso, kunye / okanye kwiiNkonzo, ezenziwe okanye ezinikezelwa ngabasebenzisi okanye ngamanye amaqela esithathu.
Nceda uqaphele ukuba eminye imimandla isenokungakuvumeli ukukhutshelwa ngaphandle kweziqinisekiso ezichaziweyo, ke ezinye zezi zinto zingasetyenziswanga apha ngasentla azinakusebenza kuwe. Jonga imithetho yakho yasekuhlaleni ngayo nayiphi na imiqobo okanye izithintelo ngokubhekisele kukhutshelo ngaphandle kweziqinisekiso ezichaziweyo.
Umda woxanduva lwezigidi zabenzi, abaXhasi kunye nabaNikezi layisenisi
Ngaphantsi kwazo naziphi na iimeko, naliphi na iqela, iinkampani eziphantsi kwalo kunye nabaphetheyo, abalawuli babo, amagosa, abasebenzi okanye iiarhente, kunye nabanye abameli, baya kuba noxanduva lwayo nayiphi na intlawulo engathanga ngqo, elandelwayo, enokubakho, ekhethekileyo, okanye yomonakalo, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwinzuzo elahlekileyo kwaye Ukuphazamiseka kweshishini, nokuba kungenxa yesivumelwano okanye ukungcungcuthekiswa, kubandakanya ukungakhathali, okuvela nangayiphi na indlela ekusetyenzisweni kweWebhusayithi, iiMveliso, iiNkonzo, kunye / okanye iziqulatho zayo, okanye nakweyiphi na iwebhusayithi edibeneyo nokuba loo mntu ucetyiswe ngokucacileyo malunga nokwenzeka yomonakalo onjalo. Ngaphandle komonakalo onxulumene nokungqinwa ngokusemthethweni okanye ukwamkelwa kwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda obangelwe ziMveliso kunye / okanye iiNkonzo njengoko zinikezelwe liqela ngaphandle komxholo wesithathu, akukho sigxina seqela eliza kudlula kwisamba esipheleleyo esifunyenwe zizigidi zabenzi ezivela kuwe ngexesha Iinyanga ezilishumi elinambini (12) zexesha kwangoko phambi komhla wokonakala okokuqala.
Umelo kunye neeWarranty
Umele kwaye uqinisekisa ukuba ukusebenzisa kwakho iWebhusayithi, iiMveliso, kunye / okanye iiNkonzo kuya kungqinelana naso nasiphi na isivumelwano phakathi kwakho noMenzi wezigidi, abenzi bezigidi. umthetho wabucala, le Migaqo, kunye nayo nayiphi na imithetho esebenzayo kunye nemimiselo, kubandakanya ngaphandle komda kuyo nayiphi na imithetho yendawo okanye imigaqo kwilizwe lakho, kwilizwe, kwisixeko, okanye kwenye indawo yaseburhulumenteni, malunga nokuziphatha kwi-intanethi kunye nomxholo owamkelekileyo, kwaye kubandakanya yonke imithetho esebenzayo ngokubhekisele kugqithiso lobuchwephesha. idatha ethunyelwa kwilizwe ohlala kulo, kunye nayo nayiphi na eminye imigaqo-nkqubo esebenzayo okanye imigaqo kunye neemeko.
Ngokuxhomekeke kwizithintelo ezichazwe apha, amaqela ayavuma ukukhusela, ukuhlawulisa, kunye nokugcina omnye nomnye engenabungozi, kubandakanya neenkxaso-mali kunye namashishini, abalawuli babo, amagosa, abasebenzi okanye iiarhente, kunye nabanye abameli, ngokuchasene nawo onke amabango, ilahleko, umonakalo, amatyala, kunye neendleko (kubandakanya kodwa kungaphelelwanga kwimirhumo yamagqwetha afanelekileyo kunye neendleko zenkundla), ezivela ngenxa, ezinxulumene okanye ezinxulumene:
ukwaphula le Migaqo, okanye nasiphi na isivumelwano phakathi kwamaqela, okanye
Nasiphi na isityholo sokuba naluphi na ulwazi okanye izinto (kubandakanya nasiphi na isiqulatho) sinyhasha amalungelo alo naliphi na iqela lesithathu.
Uyaqonda kwaye uyavuma ukuba, ngokusebenzisa iiMveliso kunye / okanye neeNkonzo, uxanduva lwakho kuphela kuyo nayiphi na idatha, kubandakanya ulwazi oluchongiweyo, oluqokelelweyo okanye olwenziweyo ngeMveliso kunye / okanye neeNkonzo. Uyakukhusela, uxolelanise, kwaye ubambe abaMenzi ezigidi abangenabungozi, ngaphandle kwesithintelo, kuwo wonke umonakalo ngokunxibelelene (nokutyholwa) ukwaphulwa kwayo nayiphi na imithetho yabucala ngokusebenzisa iiMveliso kunye / okanye neeNkonzo eziphantsi kweakhawunti yakho.
Iqela ngalinye liya kuthatha i-inshurensi eyoneleyo yokugubungela umngcipheko wayo apha ngezantsi, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwi-inshurensi yetyala kunye / okanye yemveliso Ngokumalunga nokukhuseleka, ukugcinwa kwemfihlo kunye nokuthembeka kwedatha, iqela ngalinye linoxanduva lokugcina amanyathelo afanelekileyo obuchwephesha kunye nombutho wokukhusela idatha eqhutywa kwiinkqubo zabo nakwiinkqubo zomntu wesithathu ezisetyenziswa liqela elibandakanyekayo.
Abenzi bezigidi abazukubekwa tyala nakuphi na ukulibaziseka ekwenzeni okanye ukusilela ukwenza naziphi na izibophelelo kuwe ezibangelwa ziziganeko ezingaphaya kolawulo lwazo olufanelekileyo.
Isigidi seMenzi siya kukwazisa ngokukhawuleza ngokubhaliweyo ngezizathu zokulibaziseka okanye ukumiswa (kunye nexesha elinokubakho) kwaye baya kuthatha onke amanyathelo afanelekileyo ukoyisa ukulibaziseka okanye ukumiswa.
Ulwimi lokulamla luya kuba sisiNgesi. Naliphi na ibhaso, isigwebo okanye intlawulo ekhutshwe phantsi kolo lawulo inokungeniswa nangaliphi na iqela ukuze kunyanzeliswe yiyo nayiphi na inkundla yolawulo olunobuchule.
Ukuba naliphi na icandelo lale Migaqo ligcinwe lingasebenzi okanye linganyanzeliswa, elo candelo liya kuthathwa njengelibonisa injongo yala maQela, kwaye ezinye iindawo ziya kuhlala zisebenza ngokupheleleyo. Ukurhoxiswa leliphi iqela lalo naliphi na ixesha okanye imeko yale Migaqo okanye nakuphi na ukophulwa kwayo, kuyo nayiphi na imeko, ngekhe uliyeke elo xesha okanye loo meko okanye nakuphi na ukwaphulwa kwayo okulandelayo. Unokwabela amalungelo akho phantsi kwale Migaqo kuphela kulo naliphi na iqela elivumayo, kwaye livume ukubotshelelwa, yimigaqo ebhaliweyo. Isigidi seSenzi sinokwabela amalungelo aso phantsi kwale Migaqo ngokokubona kwayo. Le Migaqo iya kubophelela kwaye iya kuqinisekisa ukuxhamla kwamaqela, abaphumeleleyo kunye nokuvunyelwa ukwabela. Uyavuma ukuba akukho manyathelo adibeneyo, intsebenziswano, ingqesho, okanye ubudlelwane be-arhente obukhoyo phakathi kwakho nathi ngenxa yeMigaqo, okanye ukusebenzisa kwakho iWebhusayithi, iiMveliso, kunye / okanye neeNkonzo.
Inqaku elikhethekileyo ngabantwana
IWebhusayithi ayiyilelwanga okanye ayenzelwanga ukuba isetyenziswe ngabantwana abangaphantsi kweminyaka eli-16, kwaye iiMveliso neeNkonzo zethu azinakuthengwa ngabantwana abangaphantsi kweminyaka eli-16. Asiqokeleli ngabom iinkcukacha zobuqu kwiindwendwe ezingaphantsi kweminyaka eli-16. Ukuba ungaphantsi kweminyaka eli 16, awuvumelekanga ukuba ungenise naluphi na ulwazi ngawe. Ukuba ungaphantsi kweminyaka eyi-16, kuya kufuneka usebenzise iWebhusayithi kuphela ngemvume yomzali okanye yomgcini.